Wararka Dibeda — Dawan News
Wershadda ay ciidamada dalkaasi Ruushku ku lee yihiin jamhuuriyadda Tova ee Barriga dalkaasi Ruushka ayaa u bedelay gawaadhida ciidamadu isticmaalaan ee Beebeega Somalidu u taqaano kuwo la saaray qoryo waaweyn oo nooca kaaraha ah. Qorigan gaadhigan la saaray ayaa ah mid gaadhaaya dhererkiisu ilaa 120mm , kaas oo ah nooca […]
Khubarro u dhalatay dalkaasi Norway ayaa daraasad ay sameeyeen kaga jawaabay su’aal in badan ay culimada Saynisku...
Dalkee Duniada Ugu Nolol Wanaagsan?
Dalka New Zealand waa waddanka ugu nolosha wanaagsan dunida. Wuxuu ku yaallaa dhinac koonfureed ee meeraha dhulka, waxaana...
January 17, 2018, 6:43 am
Qiso: Naftaada Beddel Kadib Dunidda!
Boqor xukumayay dawlad ballaadhan ayaa maalin u baxay inuu soo kormeero magaalooyinka isagoo lugaynaya. Markii uu safarka...
Khubarro u dhalatay dalkaasi Norway ayaa daraasad ay sameeyeen kaga jawaabay su’aal in badan ay culimada Saynisku is weydiiyeen oo ahayd in jiirku gudbin karo xanuunka Daacuunka iyo kaalintii uu ku lahaa dacuunkii dadka reer Yurub layn jiray waqtiyadii hore . Khubaraddan reer Norway ayaa daraasaddan oo ay in muddo […]
Dalka New Zealand waa waddanka ugu nolosha wanaagsan dunida. Wuxuu ku yaallaa dhinac koonfureed ee meeraha dhulka, waxaana uu ka kooban yahay laba jasiiradood oo ah waqooyi iyo tan koonfureed. Bulshada New Zealand ayaa ka kooban 4.8 Milyan qof, waxaana ay ku jiraan dhinaca nolosha heerka ugu sareeya dunida dhinacyada […]
Boqor xukumayay dawlad ballaadhan ayaa maalin u baxay inuu soo kormeero magaalooyinka isagoo lugaynaya. Markii uu safarka ka soo noqday waxa bararay lugihiisa waayo wuxu marayay wadooyin cidhiidh ah oo dhib badan. Isla markiiba wuxu soo saaray wareegto ah in dhamaan wadooyinka lagu goglo harag si aanay mar danbe u […]
Daraasad cusub oo dhinaca caafimaadka ah oo ay dhowaan soo saareen khubarro Maraykan ah ayaa lagaga digay cuntooyinka qaarkood, iyada oo cuntooyinkaasi si gaar ah loogaga digay haweenka. Haweenka ayaa la sheegay in ay cuntooyinkan si fudud uga qaadaan xannuunka Cancer-ka , gaar ahaana Kansarka ku dhaca Naasaha. waxa kaloo […]
Dahab Qiimihiisu Qaali Yahay oo La Xaday, Lana Raadinayo
Waxa ilaa hadda la raadinayaa dahab noociisu qaali yahay, kaas oo lagu xaday magaaladda Paris ee caasimadda dalkaasi Faransiiska, waxaana baadhitaanka ka qayb qaadanaya ciidamada Booliska Faransiiska iyo ciidammada Sirdoonka ee dalkaasi. Ciidamada ayaa baadi goob ugu jira tuugta xadday dahabkaasi , iyada oo laga xaday dukaankii lagu iibinaayey, sida […]
Congress-ka Maraykanka Oo Taleefannada Shirkadda Huawei Cabsi Ka Muujiyey.
Sida lagu daabacay wargeyska New York Times shirkadda AT & T ayaa joojisay iibinta taleefanadeeda cusub ee Mate 10, kuwas oo la filaayey inay dhowaan suuqyadda Maraykanka soo galaan. Shirkadda ayaa la sheegay inay u joojisay iibka taleefanadaasi arrimo dhinaca amaanka ah awgeed, sida lagu sheegay warbixin shalay lagu daabacay […]
January 11, 2018, 5:55 am
Ciidamada wadanka Ruushka ayaa bedelay qaabkii ay u samayn jireen taangiyadooda dagaalka sida lagu daabacay wargeyska Russian Times ee kasoo baxa wadankaasi oo uu wargeyska Dawan kasoo xigtay qormadan. Waxaanay sannadkan 2018-ka markii ugu horreysay soo bandhigeen qaabka cusub ee ay u sameeyeen Taangiyadooda dagaalka qaybo kamid ah, iyada oo […]
Bandhigga Shiidka Shaydaanka Janawari!
Bandhigan waxaa la qabtaa bishan aynu ku jiro ee Janawari sanad kasta, waxaana lagu soo bandhigaa magaalo ku taalla dalka Spain oo lagu magacaabo Biornal. Bandhigan oo loo yaqaano Bandhigii Jarblas waxa isugu yimaadda dhalinyarada magaaladaasi iyagoo mid kasta gacmaha ku sito xidhmooyin basal ah. Waxaana ay bilaabaan inay ku […]
January 10, 2018, 6:05 am
Qisada: Filimka Barafka Cad!
Walt Disney wuxuu ahaa ganacsade iyo filim soo saare Maraykan ah oo ku dhashay sanadkii 1901 Chicago, wuxuu ka shaqayn jiray wargeysa dalkaasi ka soo baxa. Agaasimaha wargeyska ayaa shaqada ka eryay isagoo sheegay in aanu lahayn curinta fikrado cusub oo lagu horumarin karo wargeyska iyo sheekooyin mala awaal ah […]
January 10, 2018, 5:57 am